Waajibka xusuusta: Madowga / Afrikaanka, waxaan aaminsanahay midowga Madow / Afrika waxaanan aaminsanahay inay dhici doonto "Waxaan dhexdeena kuhaynaa awood iyo karti aan kula dagaalanno boqortooyooyinka" Waxaa qoray, Thomas Sankara… (VIDEO) | KONGOLISOLO
Waajib Xusuusin: Madowga / Afrikaanka, waxaan aaminsanahay midowga Madow / Afrika waxaanan aaminsanahay inay dhici doonto “Waxaan dhexdeena kuhaynaa awood iyo karti aan kula dagaallano boqortooyo-wadaha” ee, Thomas Sankara… (VIDEO)
Posted By: KongoLisolowaa: Febraayo 12, 2020 03: 00 No Comments
Dalkii hooyo mise geeri? Waan ka adkaan doonnaa - Kaliya dagaalka ayaa sii daaya: markay dadku istaagaan, boqortooyooyinkii ayaa gariiray.
Run ahaantii, markaan arko dhalinyarada Madowga / Afrika ka iibiyaan dhulkooda ku yaal Afrika, fiisaha Yurub ama Mareykanka "Waan ooyayaa sababta oo ah runta garan maayaan. "
Madowga / Afrikaanka ee ka qeyb qaatay khiyaanada ninkaan; magacyadoodu waxay qaadi doonaan mas'uuliyad culus tan iyo ab ka ab ilaa weligiis. Waan ogahay inay jiraan qaar aan si wanaagsan u seexan xitaa markay beddelaan dhalashadooda!
Madaxweyne Thomas Sankara wuxuu ku qaabilay François Mitterrand dhaqanka suuban ee Afrika, ee leh digaag iyo ido, "Tani waa waxa aan ku haysanno guriga, wuxuu leeyahay" Xusuusku waa aasaaska shaqsiyadda shaqsiyadeed, sida dhaqanku yahay salka ku haysa shakhsiyadda wadajirka ah
Aug12 05: 38